Mihemotra ny Fifidianana | mandimby maharo
Mihemotra ny Fifidianana
Posted on 27 May 2013 by Mandimby Maharo
TSY mbola nametra-pialana ny Fat. 60 andro mialoha ny fifidianana filoham-pirenena no voafaritry ny lalana fa hametrahan’izay filohan’ny tetezamita fialana raha toa ka kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Omaly Alahady 26 May io fetr’andro io. Midika izany fa tsy mino ny hisin’ny fifidianana amin’ny 24 Jolay i Andry Rajoelina. Io tsy fialany amin’ny toerana maha filoha io dia manery ny Ceni-t hanemotra ny datim-pifidianana.
Ity fanemorana daty ity dia efa naha be resaka tamin’ny herinandro lasa. Taorian-ny fampihaonana ireo kandida mampalailay fonosana ny fianakavim-be iraisam-pirenena notanterahin’ny Fff, Csc ary ny Foloalindahy tetsy amin’ny Carlton dia nisy ny fangatahan’ireto farany ny hanemorana izany fifidianana izany, na dia 1 volana ihany aza. Fangatahana izay nalefany tany amin’dramatoa Athala Béatrice, filohan’ny Ceni-t.
Na dia tsy eto an-toerana aza nefa ny filohan’ny Ceni-t dia nanazava kosa ireo avy ao amin’ity kaomisiona ity fa tsy azo atao ny manemotra io daty ny 24 Jolay io. Dia samy mihazohazo eo aloha izany ny toe-draharaha.
Ankoatr’izay koa nefa dia mbola miray hevitra ireo kandida 38, mitaky ny tsy hiorotsahan’ireo Kandida 3 lehibe ireo. Ny Sadc moa dia mazava ny azy ny heviny: tsy hahazo fankatoavana avy aminy raha ny iray amin’ireo kandida ireo no lany.
Tags: Andry Rajoelina, Cenit, FFM, fifidianana, politiqueCategories: politique